I-Feng Shui inikeza igumbi lokulala njengeendawo ezimbini. Imibutho elula kunye nombhede yedwa, uxolo, ukulala nokuphumla. Apha, imibala ye-pastel eqinile kufuneka iphumelele, kuba yonke into ehamba phambili yowesifazane. Kodwa ukuba uyayibheka ukusuka ngaphesheya, ke umbhede unesihloko sokuthatha isenzo esisebenzayo nesomeleleyo, apho isibini sinobunye. Ukuba ukhangele zonke zobomi bakho kwaye ekugqibeleni ufumene umntu ofanayo nobomi bakho, kufuneka uvumele oko kwigumbi lakho lokulala kukho iqalo eliqinileyo elise-yang.
Yakha ukuvumelana kwi-feng shui
Okokuqala, kufuneka uqaphele ingubo yombhede. Ukuze uhlale unomdla kunye nothando kwigumbi lokulala, umbala obomvu kufanele ulawulwe, ukuba awuyithandi le mbala, ngoko unako ukuthabatha iipinki okanye i-peach tones. Eyona nto iya kunika inkxaso yakho imibutho ebomvu ebumbini lokulala, ngokukodwa ifuna izibini ezilindele umntwana. Iluhlaza okwesibhakabhaka kunye nelinen eluhlaza okwesibhakabhaka akufanelekile ukuthenga Umbala wokupholisa kunye nokungahambisani. Umbhede omhlophe ungathathi hlangothi. Kodwa iitoni ezimnyama ezimnyama zizolile kwaye zisebenzise iintsuku eziliqela ngenyanga.
Khumbula ukuba ukukhanya kufanele kube lula, kwaye izibane zebra kufuneka zijonge phantsi (kodwa ungafumani udonga ngeempondo eziza kulala phezu kombhede). Phantse ukhetho olubalaseleyo lweendonga kwiindonga luhlaza ngobumnandi. I-Blue, engayidingi ukuba isetyenziswe kwiingubo zangaphantsi, inokuthi ithathwe njengetoni lephephethi.
Ngo-Feng Shui, igumbi lokulala ligumbi lembini, ngoko akukho ndawo yokutsalwa kweentyantyambo nezityalo eziphilayo. Kwaye ukuba kukho into enje ekhoyo kwigumbi lokulala, kukholelwa ukuba iphazamisa ubudlelwane. Ngenxa yoko awukwazi ukuvumela izilwanyana zibe kwigumbi lokulala. I-aquarium ayinayo indawo yokuphamba, kwaye akukho nakwiindawo ze-seascapes kunye ne-hydromassage akufuneki kubekho, oku kuquka ukungaqondi kunye nokungazinzi.
Kungcono ukhethe umfanekiso "womgca ocebileyo" kwigumbi lokulala: abantwana abancinci, iibinibini ezintle, imifuno evuthiweyo kunye neziqhamo, iipinithi ezimnandi, kodwa kungekhona ekwindla. Kungcono ukuphepha imifanekiso emikhulu yeentyatyambo.
Ubungozi obukhulu kwigumbi lokulala buzisa izibuko, bonakalisa umtshato nothando. Kubalulekile ukwazi ukuba umntu oqhelekileyo, xa elele ebusongeni, ngoko amaphupha ayenziwa ngeendawo ezahlukeneyo ze-Astral, kodwa izibuko ezibhekiselele zingakhokelela umntu kwilizwe langaphandle, apho izidalwa kunye neepoltergeist zingena ngaphakathi (kubalulekile kuphela ukuba ukhumbule ukuxoxwa ngetyala ngezibuko). Ukuba igumbi lokulala sele libe nezibuko, ngoko busuku kufuneka bavaliwe ngendwangu okanye ngamakhethini.
Ubhedi ngamabini ama-pfen shui
Awukwazi ukulala kunye neenyawo zakho emnyango, awukwazi ukuba nemilenze yakho okanye intloko ekhomba indlu yangasese. Umgca wekhanda akufanele uhlale kufuphi nefestile. Ukuba unobhede obungalunganga, ungayilungisa kwakhona okanye usebenzise amakhethini kunye nezikrini. Kulo bhedlele akufanele kuqondiswe izinto ezinkulu kunye neembombo ezibukhali.
Isikhundla esona sichanekileyo sebhedi xa limi kufuphi nodonga, kwaye kumacala omabini kukho indawo nganye yebini. Kubalulekile ukuxelela kwingxelo yamatafula eembhedlele: akunakwenzeka ukuba babengaphezu kwebhedi.
Konke ungacingi ukuba kwigumbi lokulala kwakukho isepha, iqhosha elilihlula libe ngamacandelo amabini, ikwahlula kunye neebini, ukuhlula ubudlelwane. Kubalulekile ukugubungela ngengubo enkulu enkulu, akunakwenzeka ukuba umntu abe neyakhe. Ukuba usunayo isepha kwigumbi, ngoko unokuthenga umathenda omkhulu ongeke ukwahlula.
Nangona kunjalo, ukuba akukho bhedlele enkulu, ke kungcono ukuba neebhedi ezimbini ezimi ngokwahlukileyo, akukho mfuneko yokuyitshintsha, ngaphandle koko akuyi kuba nothando, akukho kuvumelana.
Ukutsala ulonwabo kunye nenhlanhla ebubudlelwaneni, ke phantsi komsila, faka i-mascot encinci ye-Feng Shui: isimboli seentlanzi ezimbini, i-hieroglyphic fortune okanye iqhosha elisekhohlo eliboshwe ngentambo ebomvu.
Ingaphakathi kwisitayela se-eclectic
U-Anna Sedokova ulindele umntwana wesithathu - ibhasi lephephandaba okanye inyaniso?
Indlela yokondla unina onomntwana? Iingcebiso zezobuchwephesha
Burgers kunye namazambane amnandi